सांसद रंगमती शाहीको स्कुटर :: Setopati
सांसद रंगमती शाहीको स्कुटर
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असार २७
हिलाम्य सडकमा स्कुटी चलाउँदै सांसद शाही। तस्बिर : सन्जीब बगाले/सेतोपाटी।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाही वनस्थलीको नर्सरी चोकनजिकै बस्छिन्। उनी दिनहुँ प्रदेश ३-०२ ००४ प५४९४' नम्बरको स्कुटरमा ओहोरदोहोर गर्छिन्।
यिनी उनै सांसद हुन्, जसले केही दिनअघि संसदीय विकास समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो स्कुटरमा बसेर बनस्थलीसम्म जान आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले 'काठमाडौंमा मास्क लगाउन नपर्ने गरी धूलो हटेको' दाबी गरेपछि उनको यस्तो टिप्पणी आएको थियो। आक्रोशित प्रधानमन्त्रीले मास्क लगाएर हिँड्नेहरूलाई 'सरकारविरोधी' को संज्ञा दिएका थिए।
ओलीलाई चढ्न आग्रह गरिएको त्यही स्कुटरमा दिनहुँ धूलोहिलो झेल्दै वनस्थलीदेखि मध्यसहरसम्म कसरी ओहोरदोहोर गर्छिन् त उनी?
बिहीबार अपराह्न वनस्थली चोकबाट नर्सरी चोकसम्म जाने सडक झरीले हिलाम्मे थियो। यो सडक हरेक वर्ष बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहन्छ। सात वर्ष भइसक्यो, ताल उस्तै छ। घाम लाग्दा धूलोले कुइरीमण्डल हुन्छ। पानी पर्दा हिलो जमेर हिँड्ने ठाउँसम्म हुन्न। पैदलयात्रुहरू गजगज हिलोमा लुगा स्याहार्दै कष्टपूर्ण तरिकाले हिँडिरहेका हुन्छन्।
सडकपेटी भइदिएको भए पैदलयात्रुलाई तैबिसेक जोगिने ठाउँ हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। उनीहरू तीव्र गतिमा आएको गाडीले हिलो छ्याप्ला भनेर डराउँदै किनारतिर ढलपल ढलपल हिँडिरहेका हुन्छन्। स्कुटर र मोटरसाइकल त कहाँ जाऊन्, हिलोमै हेलिन्छन्।
'पानी पर्यो भने हिलो हुन्छ, नपरे धूलोले केही देखिन्न। बेलाबेला त लाइट नै बाल्नुपर्छ,' सांसद रंगमतीले भनिन्, 'कहिले हिलोबाट जोगिएर त कहिले धूलोबाट जोगिएर संसदसम्म पुग्दा थकित भइसकेको हुन्छु। आधा ऊर्जा त यसै मरिसक्छ।'
बालुवाटारमा बस्नेहरूले धूलो नदेखे पनि सडकमा हिँड्ने र सार्वजनिक यातायात तथा मोटरसाइकल-स्कुटर चढ्नेहरू धूलोहिलोका भुक्तमान रहेको उनले बताइन्।
'प्रधानमन्त्रीज्यूले काठमाडौंका जनताले मास्क लगाउन छाडिसके भनेपछि सबै जनतालाई रिस उठ्यो,' उनले भनिन्, 'बालुवाटार र सिंहदरबारबाट मात्र हेरेर भएन। कालो सिसा चढाएर एसी गाडीमा हिँड्नेहरूले यसो कहिलेकाहीँ सिसा खोलेर हेरिदिनुपर्यो, अनि पो देखिन्छ काठमाडौं कति हिलाम्मे छ, कति धूलाम्मे!'
प्रधानमन्त्री ओलीलाई काठमाडौंको वास्तविक अवस्था देखाउन भनेरै आफूले स्कुटरमा बसेर वनस्थलीसम्म जान आग्रह गरेको उनले बताइन्।
'मास्कबिना जनता हिँड्न सक्दैनन्। आफ्नो आवाज कसरी पुर्याउने भनेर जनतालाई लागेका बेला मैले जनताका कुरा संसदीय समितिमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको हुँ,' उनले भनिन्।
सडकको हिलो र धूलो छिचोल्दै यात्रा गर्दै आएकी उनी मास्क लगाएकै भरमा सरकारविरोधी देख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ चित्त नबुझेको बताउँछिन्।
'हिलोले कहिलेकाहीँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन। स्कुटी चिप्लिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ,' मास्क मात्र होइन, सलले आँखाबाहेक सबै अनुहार ढाकेर स्कुटर चलाउने शाहीले भनिन्, 'यति गर्दा पनि अनुहारमा धूलो छेकिँदैन।'
विकास समिति बैठकमा १५ सय किलोमिटर सडक सुधार भएको सरकारी दाबी पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन। राजधानीमा आफू हिँड्ने लैनचौरदेखि सोह्रखुट्टेसम्मको सडक मात्र सुधार भएको उनको भनाइ छ।
'यसअघि स्थिर सरकार थिएन। काम गर्छु भन्दा पनि अवरोध आउँथ्यो। अहिले त सरकारले काम गर्न सक्छ,' उनले भनिन्, 'सरकारमा रहेकाहरूले भने आफ्ना स्वार्थका बाहेक केही काम गरेनन्। जनताका आवश्यकता र चाहनामा कहिल्यै ध्यान दिएनन्।'
गत वर्ष असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओलीले जतिसक्दो चाँडो सडकका खाल्डा पुर्न र सडकहरू मर्मत गर्न निर्देशन दिएका थिए। सडकको दुरावस्था भने जहाँको तहीँ छ। यसमा उनले नेतृत्व गर्नेहरूको इच्छाशक्तिकै कमजोरी देखेकी छन्।
'काम गर्ने संयन्त्र पनि दोषी होला, तर काम लगाउनेहरूले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ। आफू ननिस्किए पनि रिपोर्ट लिन सक्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'देशको प्रधानमन्त्रीले चाहे के हुँदैन? काम गर्न परेन, बोल्दिए पुग्यो, भाषण गर्दिए पुग्यो।'
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले बोलेको कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्ने परम्परा नभएको टिप्पणी गर्दै सांसद शाहीले भनिन्, 'देशको अभिभावक हावामा उडेर हुन्छ?'
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २८, २०७६, १२:००:००